Facebook ကို မေးခွန်းထုတ်ဝေဖန်လိုက်တဲ့ ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတ ဒူတာတေး
Facebook က ဖိလစ်ပိုင်မှ အကောင့် အနည်းဆုံး ၁၅၅ ခုကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတ ရိုဒရီဂို ဒူတာတေးက Facebook အနေနဲ့ ၎င်းရဲ့အစိုးရ ရည်မှန်းချက်တွေကို လူအများသိစေရန် လုပ်ဆောင်နေခြင်းကို မရပ်တန့်နိုင်ကြောင်းနဲ့ ၎င်းရဲ့နိုင်ငံမှာ Facebook ရှိနေခြင်းဟာ မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း ပြောသင့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အစိုးရက ပြည်သူတွေကောင်းကျိုးအတွက် ‌Facebook ပေါ်မှာ အားပေးထောက်ခံ ပြောဆိုတာတွေ လုပ်မရဘူးဆိုရင် ကျုပ်တို့နိုင်ငံမှာ ခင်ဗျားတို့ရှိနေတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲ?
"ကျုပ်ပြောတာ နားထောင်ပါ Facebook, ကျုပ်တို့ကို ကူညီနိုင်တယ်လို့ မျှော်လင့်ထားပြီး ခင်ဗျားတို့ကို ဒီနေရာမှာ လုပ်ငန်းလုပ်ခွင့်ပြုထားတာပါ၊ အခု အစိုးရက ပြည်သူတွေကောင်းကျိုးအတွက် ‌Facebook ပေါ်မှာ အားပေးထောက်ခံ ပြောဆိုတာတွေ လုပ်မရဘူးဆိုရင် ကျုပ်တို့နိုင်ငံမှာ ခင်ဗျားတို့ ရှိနေတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲ?" လို့ သမ္မတဒူတာတေးက မေးခွန်းထုတ် ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
Facebook က တရုတ်နဲ့ ဖိလစ်ပိုင်မှ အကောင့်တု (fake account) တွေကို စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်မှာ ဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီးနောက် ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဒူတာတေးရဲ့ ယခုပြောဆိုမှု ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Facebook က ဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့ ဖိလစ်ပိုင်မှ အကောင့် ၁၅၅ ခုထက်မနည်းမှာ နိုင်ငံရေးပါတီ Communist Party of the Philippines နဲ့ ၎င်းရဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ New People's Army (NPA) တို့ကို ‌ဝေဖန်ခဲ့တဲ့ အကောင့်အချို့လည်း ပါဝင်ပါတယ်။
Facebook က ဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ်နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့တို့နဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ အကောင့်တုတွေကိုလည်း ဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းတို့ကတော့ ထိုအကောင့်တွေနဲ့ ဆက်စပ်မှုမရှိကြောင်း ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ်က မိဘအုပ်စုတစ်ခုက ကွန်မြူနစ်တွေရဲ့ လူသစ်စုဆောင်ရေးလှုပ်ရှားမှုအကြောင်း နားလည်းသိရှိစေရန် အချက်အလက်မျှဝေနေတဲ့ စာမျက်နှာ (page) တစ်ခုကို Facebook က ဖျက်သိမ်းရန် ဆုံးဖြတ်ခြင်းအပေါ် ဝမ်းနည်းမိကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောခဲ့ပါတယ်။
ကျုပ်တို့ကို ခင်ဗျားတို့က မကူညီနိုင်ဘူးဆိုရင် ဒီနိုင်ငံမှာ လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ ဆက်ခွင့်ပြုထားရတဲ့အချက်က ဘာဖြစ်မလဲ?
ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရနဲ့ NPA တို့ကြား ၁၉၆၈ ခုနှစ်ကတည်းက တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီး လူဦး‌‌ရေ သောင်းနဲ့ချီ သေဆုံးခဲ့ကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ (Armed Forces of the Philippines) က Facebook အနေနဲ့ "Hands off Our Children" အမည်ရှိ page ကို ပြန်ထားပေးနိုင်ရန် မေးမြန်းစုံစမ်းခဲ့ကြောင်း ပြောခွင့်ရအမျိုးသားက ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်အတွင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ ထို page ဟာ စစ်တပ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ တိုးတက်မှုတွေကို မျှဝေနေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့က ၎င်းကဆိုပါတယ်။
"ကျုပ်တို့ကို ခင်ဗျားတို့က မကူညီနိုင်ဘူးဆိုရင် ဒီနိုင်ငံမှာ လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ ဆက်ခွင့်ပြုထားရတဲ့အချက်က ဘာဖြစ်မလဲ? ကျုပ်တို့က အများပြည်သူ ပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်း ပြောနေတာ မဟုတ်ဘူး၊ လူအစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်တာကို အားပေးထောက်ခံနေတာ မဟုတ်ဘူး၊ ဒါက အတွေးအခေါ် အယူအဆ ငြင်းခုံမှုတစ်ခုပဲ" လို့ ဒူတာတေးက ဆိုပါတယ်။
"ခင်ဗျားတို့က သူပုန်ထတာကို အားပေးနေတယ်ဆိုရင်၊ ခင်ဗျားတို့ ရည်ရွယ်ချက်ရဲ့ စိတ်ကူးက ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ ကျုပ်တို့ စကားပြောရပါမယ်" လို့လည်း ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ Facebook ကတော့ အကောင့်တုတွေကို ဖျက်သိမ်းရခြင်းဟာ အစစ်အမှန်မဟုတ်တဲ့ လုပ်ကြံဖန်တီးမှု အပြုအမူတွေကြောင့်လို့ ဆိုပါတယ်။
Facebook ကဲ့သို့ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေဟာ နိုင်ငံရေးစစ်တလင်းပမာ ဖြစ်လာပြီး ဒူတာတေးရဲ့ ထောက်ခံအားပေးမှု ပိုမိုခိုင်မာစေခဲ့ကာ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရခဲ့ရာမှာလည်း အရေးပါခဲ့တယ်။ "Facebook နောက်မှာ ဘဝရှိသလား? ကျုပ်မသိဘူး" လို့ ဒူတာတေးက ပြောပါတယ်။